Abantu abasha namuhla bakholelwa ukuthi endulo ezifana earplugs, kuyinto okusunguliwe kuphela asebekhulile. Nokho, abaningi, ngenxa yokuthi sesibadala, akukwazi ukusiza ecabanga ukuthenga kwabo. Ngaphansi kwaziphi izimo kubalulekile baphendukela amakhambi ukuzwa?
Ake sithi amafasitela yakho efulethini ezibheke endleleni ophithizelayo. Noma lo jantshi, lapho izitimela hamba ubusuku bonke. Noma nakakhulu - sezindiza. Bambalwa angalali ngokuthula umsindo indiza kokuthatha off, angithi? Zikhona nezinye izizathu ukusebenzisa earplugs ukulala. Ngisho noma amafasitela yakho nazo egcekeni, ehlobo ngeke bakwazi bazivikele nokumemeza zokudakwa nezingoma kwemikhankaso intsha bephuza ubhiya ngaphandle. Kodwa ngezinye izikhathi umsindo sibi izitimela monotonic noma izimoto! Ikakhulukazi uma umuntu ovela ekhulelwa ukuphumula ukufaka emotweni protyuningovannoy yakhe umculo ngevolumu ephelele.
Njengoba okuningi njengoba kungase kuzwakale ezihlekisayo, kodwa earplugs nokulala singaba usizo kabi uma une izilwane ekhaya. Ezinye izinja uthanda bayaklabalasa ebusuku, namakati - ukuthethisa izwi ezimbi. Ngokuvamile, umthombo umsindo kungaba eziningi, futhi isimiso sezinzwa yomuntu yesimanje ngikhathala ukucindezeleka njalo futhi nemvelo okubi, ukuthi iphupho siba nezinzwa ezisenza sizwele kakhulu. Ngakho kungenzeka ukuletha umzimba ukuqwasha futhi, ngenxa futhi ukucindezeleka. Yiqiniso, cishe noma yikuphi ukuqhubeka ku umsebenzi ke umbuzo kuyoba.
Kunezinto ezimbalwa okufanele ayicabangele lapho ekhetha earplugs zabo ukulala. Izibuyekezo wale mikhiqizo isukela nomdlandla ukuze negative, ngenxa ubuhlungu lapho egqoke. Ungakhohlwa ukuthi lena, okokuqala - kokuzwa Ukuvikelwa, ngakho-ke, amehlo konke okusemandleni kufanele kukhokhelwe izakhiwo ekhansela umsindo.
Zenziwa ngezinto ezahlukene, kodwa earplugs kangcono ingalali kufanele kube, okokuqala kunakho konke, soft futhi iphephile lapho lusetshenziswa, umuntu ebusuku akuyona ngephutha ubuhlungu eardrum yakhe. Qaphelani ukuba okokusebenza ezifanele kakhulu kuwe umsungulo ukwenza wena lihlale kahle ngangokunokwenzeka ngenkathi ugqoke izihlungi umsindo ekhethiwe.
Kukhona amamodeli ngqo ubuthongo, kodwa kukhona earplugs jikelele. Uma ungafuni ukuchitha imali eningi, inketho yokugcina ezikufanelayo kahle. Ababona kuphela ezishibhile, kodwa futhi kulula kakhulu ukuyisebenzisa, plus singaba usizo kabi hhayi kuphela ebusuku kodwa futhi ezindaweni ezinomsindo ezifana amaqembu kanye ema-disco, noma ngisho esitimeleni.
Uma ukhetha izihlungi umsindo unqume ukuthi amamodeli wakho alahlwayo noma esebenza kudingeka. Ngokwesibonelo, uma uya yokulala nabangani abahlala eduze esiteshini sesitimela, ungathenga earplugs alahlwayo - kungcono ezishibhile kanye nama-practical. Uma uya ukuze avikeleke emimoyeni umsindo endlini yakhe, khetha inketho esebenza. Khumbula ukuthi ngo-mBhalo kubalulekile ukuba banake induduzo.
Namuhla kukhona ezahlukene izihlungi sokuzwa, konke kuncike imigomo yakho kanye nesabelomali. Leyo mikhumbi ukhululekile kakhulu eyenziwe abicah, zingabantu ergonomic futhi akavumi ukuba noma yimuphi ukungakhululeki ngesikhathi ukusetshenziswa enwetshiwe.
Ukuze uthole ubuthongo elula futhi kumnandi Kubalulekile ukukhetha imodeli ukuthi ikufanele wena, ngakho-ke kunengqondo ukuzama earplugs alahlwayo nezakhi ezihlukene.
Sifisela wena ubusuku obuhle!
Ephusheni ukubona ayakhulelwa.
Sleeping amaphilisi: izinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka. Yiziphi amaphilisi elele ukukhetha?
Amaphupho Polyphase - yikhono ukulala amahora amabili ngosuku!
Amagama lwamaSlav for girls: yini ukukhetha?
Jacket kwesitayela abamhlophe nabansundu
Kumiswa isithakazelo ulwazi izingane esikoleni samabanga aphansi